बुद्द कसरी भए त बिस्णु भगबान को नबौ अबतार? - aajakoparibesh
बुद्द कसरी भए त बिस्णु भगबान को नबौ अबतार?
आजको परिबेश Thursday, May 7th, 2020
बुद्ध, हिन्दु धर्मावलम्बीहरुका लागि नवौं अवतार हुन। बुद्ध धर्माबलम्बीहरुका लागि एकमात्र देवता। अन्य मार्गीहरु वा सबैका लागि एक शान्तिका दूत, शान्तिका पुजारी, अहिंसाका पथप्रदर्शक, जीवजन्तु तथा वातावरणका संरक्षक। त्यस्तै, बुद्ध विपश्यना ध्यानका अन्वेषक। नेपालका एक महामानव, नेपालीहरुका गौरवका व्यक्तित्व, नेपालका राष्ट्र विभूती। सबै विश्वकालागि एक महान् व्यक्तित्व, महापुरुष।
बुद्ध हिन्दु परिवारमा जन्मिनु भयो। उहाँको नामाकरण संस्कार, चूडाकर्म, बिबाह आदि सबै हिन्दु रिती संस्कार अनुसारको गरिएको थियो। ज्ञानको खोजिका क्रममा उहाँले विभिन्न ऋषि मुनिहरुबाट धर्म ग्रन्थका ज्ञान तथा सन्देशहरु लिनुभयो, अध्ययन गर्नुभयो। त्यसबखत धेरै धार्मिक गुरुहरु थिए। ति मध्ये अलारा कलमा एक प्रख्यात गुरुथिए, उहाँसँग बुद्धले आधात्म ज्ञान, ध्यान, योग आदिको शिक्षा लिनु भयो। केहि समय मै बुद्धले गुरुले जानेको जत्तिकै शिक्षा प्राप्त गर्नु भयो र ज्ञानमा गुरु सरह नै हुनुभयो। गुरुले त्यहाँ अरु नयाँ प्रशिक्षार्थीहरुलाई शिक्षा दिन, शिक्षक हुन बुद्धलाई अह्राउनु भयो, तर बुद्धको ज्ञानको भोक मेटिएको थिएन। उहाँ अर्को शिक्षकको खोजिमा लाग्नु भयो र पछि उदका नामक शिक्षकसँग शिक्षा लिन थाल्नु भयो। थोरै समयमा गुरुसरहको शिक्षा प्राप्त भएपछि अरु गुरुको खोजीमा लाग्नु भयो। त्यसपछि जति जति गुरुहरु बनाउनु भयो ति गुरुहरुबाट पाएको शिक्षा उहाँलाई अपुग हुन्थ्यो र उहाँ अझ बढी यथार्थ ज्ञानको भोको बनी ज्ञानको खोज्नेक्रममा निरन्तर लाग्नु भयो।
त्यसै बिचमा उहाँसँग पाँचजना साथीहरुसँग भेट भयो। बुद्धले उपवास बसी पाँचबर्ष सम्म कठोर तपस्या गर्नुभयो, त्यस बखत ति पँाच साथीहरुले उहाँको रेखदेख गर्न मद्दत गरे। यस्तो कठोर तपस्या गर्दा उहाँको शरिरमा हाड छाला मात्र बाँकि रह्यो। यस्तो चरम ध्यान गर्दा पनि ज्ञान प्राप्त नभएपछि बुद्धले शरिरलाई कठोर यातना दिएरमात्र ज्ञान प्राप्त हुँदो रहेनछ, अनुत्तरित प्रश्नहरुको उत्तर प्राप्त हुन्नभन्ने लाग्यो र भिक्षाटन गर्न शुरुगरी शरिरलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन पट्टि लाग्नु भयो। यो देखेर ति पाँचसाथीहरु दुःखी भए र बुद्धलाई एक्लै छोडी गए। त्यसपछि बुद्ध गयामा गई एक रुखमुनि बसी विपश्यना ध्यान गर्न लाग्नु भयो। पूर्णिमाको दिन उहाँलाई पूर्ण ज्ञान प्राप्त भएको थियो।
बुद्धले २९ बर्षको उमेरमा राजदरवार, घर परिवार छोडनु भयो। ६ बर्षसम्म ज्ञानको खोजीगरी ३५ बर्षको उमेरमा ज्ञान प्राप्त भयो। त्यपिछि करिव ४५ बर्षसम्म आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको दिक्षा अरुहरुलाई दिई दुःख क्लेसबाट मुक्त हुन मद्दतगरी समाज सेवा गर्नु भयो। हरेक दिन शुभ प्रभातका समय देखि रातको मध्यान्न सम्मपनि आश्रममा आउने व्यक्तिहरुलाई सेवा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई केवल दुई घण्टामात्र विश्रामको आवश्यकता पर्दथ्यो। त्यो विश्रामको समयमा पनि उहाँ जागा, सचेत नै बस्नु हुन्थ्यो।
बुद्धलाई हिन्दुहरुले नवौ अवतार मान्दछन्। तर, नवौं अवतार मानेपनि कुनै पनि हिन्दु धर्मग्रन्थमा बुद्धका लिलाहरुको बर्णन गरिएको छैन। हिन्दुहरुको पवित्र धार्मिक ग्रन्थ श्रीमदभागवत् पुराणमा विष्णु भगवान्को अन्य अवतारहरुको चरित्र बारेमा कथाहरु राखिएका छन्। विशेषगरी श्रीकृष्णको चरित्र बढी विस्तार पूर्वक राखिएको छ। सिता रामको चरित्र पनि छैन। त्यस्तै कृष्ण पछि भगवान् बुद्धको अवतार भएकोमा बुद्धका चरित्रहरु ख्ोाई समाबेस गरीएको? नवौं अवतार, विष्णुको पछिल्लो अवतार भएकोले बुद्धको महिमा त झन बढी हुनु पर्ने, किन हो श्रीमदभागवत् पुराण लेख्ने पण्डितले बुद्ध चरित्र राखेनन, मलाई अचम्म लागि रहेको छ। तपाईहरुमध्ये कसैलाई यसबारेमा ज्ञान भएमा कृपया बाँडनु होला।
कतिपय को भनाई हुन सक्छ, श्रीमदभागवत् पुराण बुद्ध जन्मनु अघि र कृष्ण जन्मेेपछि लेखिएको भन्ने। तर, त्यसमा कुनै तुक छैन। किनभने बुद्ध अघि सबै श्रृति, स्मृतिमात्र थियो, लिपीबद्ध गरी लेखिएका धर्मग्रन्थहरु थिएनन्। यदि तपाईहरु यसमा सहमत हुनुहुन्न भने, कृपया आफ्नो विचार राख्नुहोला।
ल मानौ, श्रीमदभागवत् पुराण बुद्ध जन्मिनु अघि नै लेखिएको थियो भने, बुद्धको अवतार भएपछि र बुद्धको निर्वाणा भएपछि किन अर्को श्रीमदभागवत् पुराण भाग दुई लेखिएन? यो नलेख्नु नै हिन्दु धर्म पछि पर्नुको कारण हो।
का’न्छो पु’स्ता र अ’बको बा’टो- प्रदिप न्यौपाने